दैव पनि कति निष्ठुरी ? श्रीमति अस्पतालमा श्रीमानको अबस्था यस्तो ३ बर्षीय छोराको विचल्ली (भिडियो) – Namaste Host
April 11, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on दैव पनि कति निष्ठुरी ? श्रीमति अस्पतालमा श्रीमानको अबस्था यस्तो ३ बर्षीय छोराको विचल्ली (भिडियो)
काठमाडौ । उनका हात खुट्टा चल्दैनन । हात खुट्टा नचलेपछि हिड्न डुल्न सकिदैन । तर उनलाई दिनहुँ अस्पताल नधाई हुँदैन । एकातिर श्रीमती अस्पतालमा इन्तु न चिन्तु भएर बसेकी छन् भने घरमा ३ वर्षकी सानी छोरी छन् । हातखुट्टा नचल्ने उनी श्रीमतीको स्याहार गरुन् की छोरीको पेट भरुन् । उनको आफ्नो ब्य था त छंदैछ । यदि इश्वर छन् भने एउटै मानिसलाई यति धेरै दुख किन दिन्छन् होला ? आफ्नै सन्तानलाई यति धेरै दुख दिएर इश्वरले कसरी हेर्न सकेका होलान् ?
अरु सामान्य मानिसले देख्दा पनि उनको हालत दयालाग्दो छ । हामी सग्लो मानिस केही गरेर जिवन चलाउन सकिन्छ । तर हात खुट्टा नै नचल्ने नरवहादुर खत्री म्याग्दी जिल्लाका उनी मणीपाल अस्पताल आइपुगेका छन् । उनको श्रीमती मणीपाल अस्पतालमा छन् । म जसरी पनि श्रीमती बचाउन चाहन्छु, उनले भने, अब म संग केही छैन कि ड् नी बे चे र भएपनि ब चा उन पाए हुन्थ्यो । चार हात खुट्टा टेकेर उनी मणीपाल अस्पताल पुग्छन् ।
धर्म गर्न कुनै मन्दिर धाइरहन पर्दैन । यस्तै बेसहाराहरुलाई सहयोग गर्दा सबैभन्दा ठूलो पुण्य मिल्छ । सहयोग गर्न चाहनेहरुका लागि उनी एक वास्तविक दु खी पात्र हुन् । यस्तो अवस्थाका नरबहादुरले श्रीमती प्रति देखाएको माया वास्तवमै प्रेरणादायी छ ।
सानो वहानामा सम्बन्ध विगार्ने श्रीमान श्रीमतीले उनको संघर्ष हेर्न आवश्यक छ । उनको श्रीमतीको मु टु मा प्वा ल प रे को र उपचार गर्न पैसा नभएपछि उनले सहयोगको माग राखेका छन् । ११ दिन देखि अस्पतालमा राखेर उपचार गरिएको छ । उनको फोक्सोमा पनि समस्या छ । अचानक श्वास फेर्न कठिन भएपछि अस्पताल ल्याइएको थियो । आफु भने जन्मदै हात खुट्टा नचल्ने भएको बताएका छन् ।
एकासी ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
बिबाद पछि बोलिन कल्पना दाहाल ! रुँदै भनिन बाहिर जे देखेँ त्यसैलाइ गित बनाएर गाएँ, मेरो के दोष? भिडितो सहित…
March 18, 2021 March 18, 2021 Bijay Lama
नेपाली सेनामा भर्ना भएपछि के कस्ता सुबिधा पाइन्छ ? यहाँ छ तलव, पेन्सनदेखि अन्य सुबिधासम्मको नालिवेली